အဖြူရောင် အညှော် – ဒါ့ပုံ Show | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » အဖြူရောင် အညှော် – ဒါ့ပုံ Show	13
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 13, 2015 in Drama, Essays.., Photography | 13 comments
မွအိ-အိမ်စာ ပြီးပြီချင့်။ :-)))
. နောက်လဲ ထပ်ပြီး စာ လုပ်ချင်ပါသေးတယ်။
. တစ်ခါထဲဘဲ မြန်မာအသင်းကြီး ကို ဂုဏ်ပြုပြီး အညှော်တိုက်လိုက်တဲ့ သဘောလဲ ပါပါတယ်။
ကကြီးမိုက် ကို ကျော်ဖို့ အရှိန်ယူလိုက်တာလဲ ပါပါတယ်။
သများ က နဲနဲ ကွန်ပိတေးတစ် (+ ကွန်ဆာဗေးတစ်) ဖြစ်တော့ ခင်တာလဲ ခင်တာ တစ်ပိုင်း၊ ကျော်ချင်တာလဲ ကျော်ချိန်တာ တစ်ပိုင်းမို့ ဒီ အကြော်ပို့စ် နဲ့ ကပ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ . ဘော်လုံးပွဲ ကို နဲနဲ ထပ်ကွန့်ချင်တာလေး လဲ ရှိတာမို့ ဆက်ပြစီ။
၁၅ရက်နေ့ မလဲ ထပ်ပြီး ဂုဏ်ပြု ချင်ပါရဲ့။
တကယ်ဘဲ ကြိုးစားကြတဲ့ မျက်နှာ နုနု လေး တွေ နဲ့ ကလေး တွေ ကို နိုင်စေချင်တာတော့ အမှန်ပါ။
technically အရတော့ နိုင်ဖို့ မရှိ။
ဒါပေမဲ့ spiritual အရ ဆိုရင်တော့ အတော်အားရဖို့ ကောင်းမှာပါ။
ကွင်းပါတ်ပြီး သံဗုဒ္ဓေရွတ်ပေးသူလဲ ရှိသတဲ့။
ပရိတ်ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ ပေးနေသူလဲ ရှိသတဲ့။
အဓိဌာန်ဝင် ဆုတောင်းပေးသူ တွေလဲ ရှိသတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ယိုးဒယား တွေ က ယတြာကောင်းတယ်တို့၊ အစီအမံတော်တယ် လို့ ပြောပြီး သူများ ကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ တော့ မနှိုင်းစေချင်။
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ နောက်မှာ သူများ ကတော့ ငါတို့ ကို ဘယ်လို မကောင်းကြံနေပြီလို့ အထင်မရောက်စေချင်ပါ။
ဟုတ်မှန်း မဟုတ်မှန်းမသိ။ ဟုတ်တောင် မှ လူရီဖို့ ကောင်းမှာမို့ သူတို့ စရိတ် နဲ့ သူတို့ ဟာသ ဖြစ်သွားမှာပါ။
မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့တိုင်းပြီး သူများ ကို စော်ကားသလို ဖြစ်မယ်။
. ဘော်လုံးဆိုတာ လည်ပြီး ဝင်ချင်လဲဝင် ချော်ချင်လဲချော်တတ်တဲ့ သဘောမို့ ကိုယ်နိုင်လဲ သူများကို မေတ္တာမပျက်၊ ကိုယ်ရှုံးလဲ သူများ ကို မေတ္တာမပျက် ဖို့ သတိလေးထားကြစေလိုတယ်။
သမိုင်းမှာ မြန်မာတွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် အင်မတန် အောက်တန်းကျတယ်လို့ အသတ်မှတ် ခံပြီး တော့ အနိုင် ကို မယူချင်ကြပါနဲ့ လို့စ်။
ရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခင်မင် နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းတဲ့ လူမျိုး တွေ ကြီးစိုးတဲ့ မြေလို့ သာ ပြစေချင်ပါရဲ့။
ငံပြာရည်ကြော် ကနေ စာချဖြစ်အောင် ချလိုက်တယ်။ ဘာရမလဲစ်။ lol:-))))))))))))
မွအိ နည်းကို လိုက်ပြီး ကြော်ထား တဲ့ အညှော်လေးရယ်၊ အိမ်နားက အချစ်တော်လေး တွေ ရယ် ကို ကြည့်သွားလိုက်ပါ ဦးစ်။
အိမ်စာ – အဖြူရောင် ပန်းကန်လုံး နဲ့ ငံပြာရည်ကြော်
ဇာတ်ပို့ – အဖြူရောင် ပန်းကန် ပြား နဲ့ အတို့များ
အတွဲ – အဖြူရောင် ကြောင် နဲ့ သူ၏ သူငယ်ချင်းလေး
အစပ် – အဖြူရောင်ပွင့်ဖတ် နဲ့ အဝါရောင် ဝတ်ဆံ
အခိုင် – အဖြူရောင် အပွင့်များ နဲ့ သူတို့ရဲ့ စုစည်းမှု
ဇီဇီခင်ဇော် says: အတို့ ကို လှီးး ချွတ်ပြီးး မှ ပြ တာ ပို မကောင်းးဘူးးလားး လို့စ်???
kai says: ဗိုလ်လုပွဲတော့မရောက်သေးပါဘူး..။
ထိုင်းကိုနိုင်မှဖြစ်.. ဒို့ဗမာနိုင်ပြီ.. တကယ်နိုင်တယ်ပြောနိုင်မှာပေါ့..။
အောက်က.. မိန့်ခွန်းလေးကို.. လွှင့်စေချင်..။
အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်လည်း.. ပြုံးပြုံးလေးနဲ့.. မာကြစေချင်..။
“ကျနော်တို့ ဗမာတွေမှာ အကျင့်တခုရှိတယ်။ ဘာလည်းဆိုရင် . . . . . ဒါကလည်းဘဲ ကျနော်တို့ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကျနော် ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ပုသိမ်ဖက်ကို သွားတဲ့အခါ လှေပြိုင်ပွဲတ်ခုရှိတယ်။ လှေပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ လှေပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတော့ လှေတွေ ပြိုင်လိုက်တာ နှစ်စင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာ နိုင်တဲ့အစင်းက ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။ ရှေ့ကို နဲနဲရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ တက်ထောင်တယ်။ ကြွားတာ ကြွားတာ်။ တခါ ရှုံးတဲ့အနောက်က နေတဲ့လှေကလည်းဘဲ ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။ ကြိုးစားချင် ကြိုးစားနိုင်သေးတယ်။ မကြိုးစားတော့ဘူး။ ရှုံးတော့မှာပါပဲကွာဆိုပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့ တယ်မခတ်ချင်တော့ဘူး။”
kai says: ဗိုလ်လုပွဲမှာ.. အဖြုဝတ်လိုက်ရင်တော့.. အရင်ဆုံးဟိုကောင်လေး.. ပက်လက်လန်ကျမှာပဲ..
Ma Ma says: အိမ်စာမှာ ပါ့စ်ဝတ်ဒစ်စတေးရှင်း ခိုင်ဇာပြောသလို အတို့အမြှပ်လေးကို လှီးချွတ်ပြီးမှရိုက်ရင် အောက်စတန်းဒင်းပါ ရမှာ။ အဖြူရောင်ကြောင်က ရွာထဲကကြောင်ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပဲ တကြွပ်ကြွပ်ဝါးစားစရာများ ဖြစ်သွားမလားမသိဘူး။ အောက်ဆုံးကအဖြူရောင် ပန်းကလေးက အဆုပ်လိုက်ပွင့်နေလိုက်တာ လှလိုက်တာ။
ဘာရယ်မဟုတ် သများလည်း မောင်အံစာကိုများ ကျော်တက်တော့မလားလို့ ကြိုးစားနေတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မြန်မာဘော့လုံးအသင်းး နိုင်နိုင် ရှုံးရှုံး နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဲ
ဒိုင်ကြောင့် မနိုင်စေချင်သလို သူ့ကြောင့်လဲမရှုံျးစချင်ပါ။
ကျနော်တို့မြန်မာတွေက ချစ်ချစ် မုန်းမုန်း အလွန်အကျွံပါဘဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဖုန်းကနေ ဝင်ရင် ပိုစ့်တင်လို့ရအောင်
ဦးကြောင်ကြီး says: ယိုးဒယားကို နိုင်လျင် အနော့် ကြောင်ဗွကို ရွာသူတမီးလေးတွေကို တလှည့်ဆီ ပေးလိုက်ခြင်ရဲ့… အန်အယ်လ်ဒီလော်ဘီ တီတီမြ…
Ma Ma says: ယိုးဒယားကိုနိုင်လျှင် ကြောင်သားကင်ဖြင့်ဧည့်ခံပါမည်ဆို ဟုတ်သေးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .“ကကြီးမိုက် ကို ကျော်ဖို့ အရှိန်ယူလိုက်တာလဲ ပါပါတယ်။”
.ကျော်ပါဗျာ..ကျော်ပါ…သုဋေသဏပြဉ်ဉာသျှဉ်ဂြည်း အရီးမုတ်ဆိတ်ရယ်
.ကျုပ်မတော့ ခုတလောကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်မို့..ပို့ကိုမတင်နိုင်အားသေး..
.မြန်တျန့် နိုင်ရမည်
.ဒုံး….ဒုံး….ဒုံး…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2285
Ma Ei says: အရမ်း ကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မလတ်…
အဖြူရောင် ကြောင်က ရှဉ့်ကလေးကို ဖမ်းမို့ ချောင်းနေတာများလား…
အိမ်ကကောင် တူးတူးကတော့ စာကလေး ခို တွေ့မရှောင် အကုန်ဖမ်းတာရယ်…
ပန်းဖြူကလေးတွေလဲ လှချက် အောက်ဆုံးကဘာပန်းလေးပါလိမ့် လှလိုက်တာ…
တောင်ပေါ်သား says: မြန်ကျန့်နိူင်ရမည် ဆိုလို့ ပြောဦးမယ်ဗျ ၊
ဖဘ မှာ ဖတ်ရတာ ၊ အလောင်းဘုရားဝတ်စုံနဲ့ အားပေးမယ် ဆိုသူလည်းရှိရဲ့
မင်းသား စည်သူမောင်ကလည်း အဲသလို ပြောသဗျ ၊
အလောင်းဘုရားက ထိုင်း ( ယိုးဒယား ) ကို နိူင်ခဲ့လို့လားဗျာ ၊( နိူင်တာက ဘုရင့်နောင်ပါ ) ၊ အလောင်းဘုရား ကိုယ်တိုင်တောင် တပ်ပြန်ဆုတ်လာရင်း လမ်းမှာ သေရတာ ၊
စကားမစပ် အရီးငံပြာရည်ကြော်အပေါ်က ဘာရွက်လေးလဲဗျ ၊
အောင် မိုးသူ says: ငံပြာရည်ကြော်က စားချင်စရာလေး။ အပေါ်က ဘာရွက်ကလေးလဲဟင် ပူစီနံလိုလိုအရွက်ထင်တယ်။
manawphyulay says: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂုဏ်ယူပါတယ် U23 ကလေးတွေရယ်…
အောက်ဆုံးပန်းရုံလေးက ဘာပင်လဲ စကားဝါပင်လားဟင်… အပင်သေးသေးလေးနဲ့ အရမ်းလှတယ်။